Adobe Photoshop CS5 maxkamad Extended u Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > Adobe Photoshop CS5 maxkamad Extended u Mac
Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey aad u saamaxaaya in ay isku dubaridi images sida sida aad u jeceshahay. Waxaa jira qalab horumarsan awood leh, waayo, waxaad si loo abuuro images cajiib ah oo ay ku jiraan images 3D. The kartida xoogan oo image doorashada, retouching iyo kuwa kale oo aad samaysaan shaqeeyaan si hufnaan iyo saar. Sidoo kale, Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey hayaa tayada sare ee images ka dib markii ay ku salaysayn khalkhalgelinta oo compositing.
Ogaanshaha laayeen Good
Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey aad bixisaa ogaanshaha ah ku laayeen mid aad u wanaagsan. Technology doorashada wuxuu ku siinayaa shareeraysaa sax ah oo degdeg ah oo ka mid ah wax adag. Waa ka wanaagsan in aad xakameeyo beddelid ku laayeen la Adobe Photoshop CS5 maxkamad Kordhinta.
Samee images 3D cajiib ah
Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey siisaa qalab badan oo horumarsan, waayo, waxaad si loo abuuro images 3D cajiib ah. Waxaad samayn kartaa xulashada, tafatir, compositing iyo waxyaalo badan oo kale si aad u hesho sanamyadiinna 3D.
Waa sahal in la isku dubaridi
Aad ayay u fududahay, waayo, waxaad ku wax doorashada ku laayeen samayn hadda sida Adobe Photoshop CS5 maxkamad la kordhiyey ayaa taageero fiican u farsamo sare. Iyada oo dhawr miridh, waxaad buuxin kartaa khalkhalgelinta image aad jeceshahay.
Editor ah image digital Sida, Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey waa u fiican in ay marin-habaabinayaan sawirada. Qalabka awood leh awood aad u leedahay in ay gacanta wanaagsan oo aad ku salaysayn khalkhalgelinta image. Horumar degdeg ah ee doorashada image iyo kuwa kale oo aad samaysaan si fiican oo si degdeg ah u shaqeeyaan.
Iyadoo Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey, aad edit karaa, kooban sanamyadiinna sida aad rabto. Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey raali galin lahayd waxa aad u baahan tahay. Its awood xooggan oo doorashada image aad u faa'iido badan sida aad u baahan tahay in la geesaha qaban. Guud ahaan, soo xulidda geesaha waa mid ka mid ah qaybaha khalkhalgelinta kugu adag. Adobe Photoshop CS5 maxkamad la dheereeyey hadda aad bixisaa ah ogaanshaha ku laayeen wanaagsan, sameynta nidaamka ku laayeen dheereysa oo sahlan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hesho shaqo fiican marka ay technology xulashada awood badan. Waa maxay dheeraad ah, waxaad samayn kartaa images 3D cajiib ah la Adobe Photoshop CS5 maxkamad la kordhiyey. Tani waa sidaas u weyn waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad isku day ah.
Adobe Photoshop CS5 maxkamad siyaadada ah qaababka badan oo waa weyn waa in aad leedahay waa in la abuuro sanamyadiinna aad jeceshahay.